Soosaarayaasha Shiinaha iyo Shirkadaha Shiinaha FF08 | Chenli
Darawalka gaariga ayaa doorbiday
▲ Xaraashka waxa kale oo loo yaqaan "squchet paning" 、 paning beling 、 xamuulka xamuulka kaas oo la isticmaalay markii rarida "rarida" rarka iyo bakhaarka la dhigto, in alaabtu xasillooni ama ay hagaajiso badeecada inta ay qaadayaan gawaarida, tareenka iyo markabka. Way fududahay inaad adeegsato awoodda ugu badan ee aad ugu baahan tahay inaad gacanta ku qabato waa 500N, oo ka dib markii ratchet-ka uu xirnaado ma lumi doono, nabadgelyada ayaa dabacsan.
▲ Xargaha 'chenli' kilkett kilcht waxaa si adag loo soo saaray sida caadiga ah ee loo yaqaan 'EN12195-2: 2000 standard, ka dib horumarka muddada dheer waxaan horey u leenahay awood soo saar aad u ballaaran iyo teknolojiyad soo saar noocyo kala duwan iyo cabbirro xamuul xamuul ah si ay uga dhigto badeecaddeenna tayo iyo qiime wanaagsan oo ka fiican.
F01 RATCHET STRAPS Xaddiga Badbaadinta Shaqada Ka Shaqaynta Badbaado.
Waxaan dhererka u sameyn karnaa sida ku xusan macaamiisha.
TALOOYINKA RATCHET EE noocyada kale
▲ Waxay u adeegsan kartaa habka ugu fudud ee jiidista burburay, xayiran, baabuur curyaamiyey ama jeep.Zinc steel gogol fidsan ayaa si gaar ah loogu talagalay inay ku dhejiso baabuurta si aad u fudud. Way ka fudud tahay kana sahlan tahay xarigga silsiladaha iyo silsiladaha waxaana lagu keydin karaa garka gaariga. laakiin aan lahayn miridhku, caariyaysi iyo qudhmi
▲ Xirmooyinka culus ee culus waxay isku xiri karaan si xor ah, waxay ka caawin karaan gawaarida inay ku dhex dhacaan dhoobada, ciidda ama barafka.
▲ Laba jillaab oo ku yaal dhinac kasta oo ka mid ah xargaha jiidista, qaab-dhismeedkani wuxuu si fudud ugu xirxiran karaa barta xamuulkiisa si fudud
▲ Dhererka caadiga ah waa 8m, laakiin waxaa loo beddeli karaa sida 1m illaa 50m oo heerkulka u dhexeeya waa -40 <℃ -100 ℃
▲ Kaliya isticmaashay xargaha guntin ee waxyeelloobay, sumaddu waxay si cad u muujin kartaa awoodda
▲ Ha ku xirin suunka
▲ Waxay u adeegsan kartaa gacmo-gashi ilaalin ah inay dharka ka fogaato xagal fiiqan, ka fogow inaad xirto ama gasho meesha la jeexay.
▲ ka fogow murug, xarigyo gogo 'goro ah
▲ Ha dul dhigin shay waranka loo yaqaan 'ratchet straps.it' wuxuu sababi doonaa dhaawac
▲ Xirmooyinka ayaa ku lifaaqan iyadoo lagu saleynayo baahiyaha (qabatooyin ama giraanta saddexagalka ah) ee xargaha garka.
▲ Duruufaha caadiga ah, sagxadaha dusha sare ee zinc, haddii aad u baahatid midabyo kale ama koollo PVC, fadlan la soco markii la dalbanaayo
▲ Waxaan haysannaa birta birta aan xirneyn iyo xargaha
▲ Chenli waxay hadda haysataa in kabadan 300 nooc oo ah qalab dheeri ah, waxaan ku farsameyn karnaa sheyga jaantuska tusaalaha ah.
▲ Dhig Gaariga Mashiinka Mashiinka Dhabarka leh ee gaariga wuxuu dhaqaajiyaa. Ku hagaaji qabatimidda dhamaadka si ay xirxirayaashu u adag yihiin.
▲ Ku dhaji meesha ugu hooseysa ee xirma meesha ugu sarreysa.
▲ Ku xafid jillaabadda Ratchet End meel adag oo isku xirku xiriirsan yahay oo aan waxyeelada u geysan doonin.
▲ Furtii ku wareeji durbaanka Ratchet, ka dib fur oo xir xarkaha loo yaqaan 'ratchet' si aad u adkeysid suunka.
▲ Xir qodobbada barafka waa inay ahaadaan kuwo aamin ah. Xusuuso meelaha ku lifaaqan 25 mayl kasta inta lagu guda jiro
Hore: AMMAANKA AMNIGA
4 Xarig-ku-cabbir leh Flat Hook
6 Feature Ratchet
Faahfaahinta Xariga Qiimeynta